Iyo Apple Watch ine chokwadi che97% kuyera chiyero chemwoyo | Ndinobva mac
Pasina mubvunzo Apple Watch iri kuwana yakanaka ruoko rwekurumbidza kubva payakatangwa uye ndizvo izvo Haisi nguva yekutanga kuti kunyatso kutaurwa kweApple chishandiso kutaurwa kana uchiyera kurova kwemoyo kweiye akapfeka. Mupfungwa iyi, chinhu chakanakisa ndechekuti Apple inoramba ichivandudza ma sensors ayo uye mune ramangwana yaizobata kukwana mune izvi zviyero kana ikasatodaro ...
97% yenguva iyo wachi inoona isina kujairika mukurova kwemoyo wemushandisi, ndizvozvo. Uku ndiko kunyatsoita kwakanaka kwe wachi ine makore matatu ehupenyu mumusika uyu izere nezvinhu zvine chekuita nezvehutano, asi Apple inowanzoita zvinhu nemazvo uye mupfungwa iyi Izvo zvakakosha kuti uzive kuti iko kwechokwadi kwechigadzirwa kunovimbika chaizvo kana ichiyera kupomba kwedu.
Muchiitiko ichi, chidzidzo chinoburitswa nepakati Jama Network, uye mune izvi, iko kururamisa kwewachi kunosimbiswa muzviitiko apo moyo unokonzereswa "zvisingatarisirwi". Iyo sensor pachayo inobatsirwa neiyo watchOS 4 system, iyo inokwanisa kupa ruzivo nezve yako yemoyo rate pazororo, kana iwe uchinge uchishanda uye wepasirese zuva rese. Mupfungwa iyi, kana paine chiitiko chisina kujairika mukurova kwemwoyo (kunyanya patinenge tichizorora) wachi inotiyambira uye Izvo chaizvo muchiyero ichi chidzidzo chinosimbisa kubudirira kweiyo Apple wachi.
Chaizvoizvo mune ino ndima yehutano ne HutanoKit Kumberi, kufambira mberi kukuru kuri kuitwa, asi zvakafanira kuti uenderere mberi nekuvandudza rudzi urwu rwema sensors uye software kuitira kuti iyi pesenti yepamusoro yekubudirira mune zviyero iwedzere. Chero zvazvingaitika, kukanganisa mune zviyero kunogona kuitika nekuda kwezvikonzero zvakawanda, asi chikuru hachina wachi kana zvimwe zvakamiswa zvakanaka, nekuti tekinoroji yekuyera inoshandiswa ndeyechokwadi sezvakaratidzwa muzvidzidzo izvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple Watch ndeye 97% chaiyo mukuyera chiyero chemwoyo
Mark Gurman, Anosunungura Zvaakafungidzira neChipiri: An iPad uye MacBook Pasi pe $ 1.000 XNUMX